Iza no nanoratra ity tononkalo ity ?
« Tsy nisy faminaniana avy tamin’ny sitrapon’ny olona, tany aloha rehetra ; fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona, araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy » 2 Petera 1 :21
« izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ny ho fandrenesan-draharaha, ho fanitsiaan izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana. » 2 Tmoty 3 :16
Androany maraina dia nahita ononkira mahafinaritra teo ambony biraony ny mpampianatra. Ny andalana tsirairay dia voasoratra amina loko sy soratra hafa.
- Mba avy aiza àry ity ? hoy ilay mpampianatra, liana te hahafantatra. Nanangan-tànana i Naina, namaly hoe : - Izaho, tompoko, no nandika ny andalana voalohany tamin’ny « feutre » mena. Notohizan’i Tovo hoe : - Izaho indray no nandika ny andalana faharoa tamin’ny Pensilihazo manga. Notapahin’ilay mpampianatra ny tenin’ireo ankizy : - Ny « feutre » sy ny pensilihazo dia fitaovana ihany nampiasainareo hanoratana ny teny. Fa iza no namorona ilay tononkalo ? Iza no tena nanoratra azy ?
Dia niara-niredona ny ankizy, namaly hoe : - I Noro. Izy no namorona azy, hatao fanomezana tsy ampoizina ho anao, fa izahay kosa no nanoratra.
Ny olona sasany dia mihevitra ny Baiboly tahaka ny fiheveran’i Naina na i Tovo azy. Mijanona eo amin’ny fitaovan isan-karazany nampa=iasan’Andriamanitra izy : Mosesy mpanao lalàna, Davida mpiandry ondry sady mpanjaka, Ezra mpanora-dalàna, Solomona mpanjaka be voninahitra, Matio mpamory hetra, Lioka dokotera, Petera mpanarato … Maro ny olona nanoratra ny Baiboly, ary samihafa ny fiaviany. Nefa tsy ireo mpanoratra ireo no namorona ny Baiboly, izay fitambaran-javatra tena mirindra. Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny Fanahiny, no nanonona tamin’ny tsirairay izay tokony hosratany, samy tamin’ny fotoana sy toerana nisy azy avy. Koa io boky io, izay avy amin’Andriamanitra, dia voarafitra o boky tokana mahagaga, manan-kery amin’ny vanim-potoana rehetra.
« Endrey, zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao, Andriamanitra ô ! Akory ny hamaroan’ny isany » (Salamo 139 :17).